Vatariri venhare, basa rakakosha naLaura Gallego | Zvazvino Zvinyorwa
Vatariri venhare ndeye trilogy yezvakanaka zvinyorwa zvakagadzirwa neSpanish Laura Gallego. Yakatangwa pakati paApril 2018 naKurume 2019, iwo akateedzana anoratidza zvese hunhu hwemunyori wenhau aine chimiro chepakutanga. Inonyanya kuzivikanwa nekuda kwayo kuyerera, uyezve nenyaya dzinonakidza dzakatakurwa neinoshamisa inotsanangura mhando.
Nezvikonzero izvi - maererano neongororo dzemagazini nemawebhusaiti akasarudzika - zvinyorwa zvemunyori weValencian zvinosetsa, zviri nyore kuverenga. Iwo matatu mabhuku anoumba Vatariri venhare havasi ivo vega. Pane zvese, inomiririra zita rakakurumbira mukati mebasa rakakura remunyori akasika uye nenhamba hombe dzekutengesa.
1.1 Mamwe emazita akakurumbira aLaura Gallego
1.2 Mifungo pane trilogy Guardians yeguta iri
2 Bhiiini raAxlin
2.1 Rwendo rwemusikana akasarudzika
2.2 Iyo nzira inoenda kuCitadel
3 Chakavanzika chaXein
3.1 Mhuka dzechikamu chechipiri
4 Basa raRox
4.1 Nguva yakapfuura nekiyi dzeramangwana rakanaka
Zvinyorwa zvekutanga zvaLaura Gallego zvakabva muna 1988 (pazera remakore gumi nerimwe). Kukwanisa kwake kukuru kugadzira nyika dzekufungidzira kunoita mupiro wakakosha kune tsamba. Spanish uye yeiyo zvinyorwa zvinonakidza mune zvese. Icho hachisi chokwadi chidiki, nekuti mukati meiyi subgenre hamuna vanyori vakakurumbira vanotaura chiSpanish.
Akazvarwa muCuart de Poblet (Valencian Community) muna Gumiguru 11, 1977, Laura Gallego ane degree muSpanish Philology. Kubva 1999 yakaunganidza zvinyorwa zvematanho uye kuziva nekuda kwekugadzirwa kwayo kukuru; 41 mabhuku kusvika nhasi. Yayo, mazhinji (27) enganonyorwa dzevechidiki, pamwe nenyaya dzinoverengeka dzevana, dzinenge dzese dzine fungidziro yezvinyorwa zvemabhuku.
Mamwe emazita akakurumbira aLaura Gallego
kuguma kwenyika (1998). Barco de Vapor Mubairo kubva kuWedhiyo SM (1999). Wokupedzisira weNational Prize yeVana neVechidiki Zvinyorwa.
Nhoroondo yeMambo Anodzungaira (2003) Barco de Vapor Mubairo kubva kuWedhiyo SM.
Saga Ndangariro dzaIdhun:
Saga Sara nevanotora zvibodzwa (chaicho mabhuku):
Kugadzira timu (2009).
Vasikana varwi (2009).
Vatambi vepamusoro muligi (2009).
Nhabvu nerudo hazviwirirane (2010).
VaGoleadoras havaregi (2010).
Chinangwa chekupedzisira (2010).
Iko kuimba miti (2011). National Mubairo weVana uye Vechidiki Zvinyorwa (2012 edition).
Pamusoro pezvo, Laura Gallego akatanhamara neC 2012 Cervantes Chico Prize nekuda kwebasa rake rekunyora. Kwete pasina, munyori anodudzirwa mumitauro inodarika gumi neshanu uye nenzvimbo inokodzera pakati pevagadziri vezvakanaka zvinyorwa padanho repasi rese.
Maonero pane trilogy Vatariri venhare
Aya akateedzana ndiro basa razvino raLaura Gallego. Chikamu chepamusoro chekushoropodzwa chakagamuchirwa chave chakanaka. Nekudaro, dzimwe ongororo dzinopomera bhuku rechitatu rekurebesa zvisina basa nyaya uye kuwedzera bland "filler" mavara.
Zvisinei, hapana maonero - kunyangwe zvichipesana - anogona kuramba chinhu chechisikigo chezvose zvakasikwa naGallego: ese ari matatu mabhuku anonakidza zvechokwadi. Zvakaenzana zvakanyatsonyorwa (uye zvakadzama) zvinoita kuti zvive nyore kuti vaverengi vanyure mune yavo inoshamisa nyika. Naizvozvo, ivo vanomhanya zvakanyanya uye vanonakidza kuverenga. Iyo saga inosanganisira:
Bhiiini raAxlin (Kubvumbi 2018).
Chakavanzika chaXein (Mbudzi 2018).
Basa raRox (Kurume 2019).
Kutanga kweakateedzana kunonyanya kutarisa kurondedzerwa kwenyika yakakamurwa kuita matunhu vagari varo vanogara mukushushikana kusingaperi kubva kuzvisikwa zvinotyisa. Nechikonzero ichi, chinangwa chevagari vese ndechekuzvidzivirira kubva kumatombo aya sevarume uye kuyedza kubereka kuti mhuka dzirambe dzichienderera.
Rwendo rwemusikana akasarudzika
Axlin, munyori anobva kumuganhu wekumavirira kwemuganhu, ane zvishuwo zveupenyu zvakasiyana pane kuwana murume nekuzvara. Asi, anoda kutora ruzivo rwese nezvezvikara kuti avapatsanure uye vaone kusava nesimba kwavo. Basa rine musoro mumukadzi wechidiki anopora (ane chirema) cheupenyu mushure mekurarama nekurwiswa.
Zvisinei nehutano hwake, Axlin Anofunga kuenda parwendo achiperekedzwa nevamwe vatengesi kunopedzisa kuferefeta kwake. Kune vaanozivana navo hazvisi chiitiko chinoshamisa, nekuti ndiye chete akasarudza kudzidza kuverenga nekunyora mune chinzvimbo chinonyanya kukosha kudzidza kuvhima uye kurarama pakurwiswa kwezvikara.
Iyo nzira inoenda kuCitadel
Pakati pechirongwa vamwe vatambi vakakosha vesaga vanoonekwa. Pakati pavo, Xein, murwi waane hukama hwakanyanya neruvengo. Iyo yekushambadzira inotungamira protagonist kutarisana nhevedzano yezvikara. Izvo, zvinoshanda kutora ruzivo rwekutanga rwegwara rako (bestiary). Pakupedzisira, kupatsanurwa kwayo kunosanganisira - pakati pevamwe- anotevera manhamba:
Chinangwa chikuru chevanyori vese ndechekusvika kuCitadel, nzvimbo isina mahombekombe zvachose. Naizvozvo, ndiyo chete nzvimbo yakachengeteka yekurara usiku. Kusvika kumagumo ebhuku rino zvinova pachena kuti zvimwe zvakavanzika zvakawanda zvinoramba zvisina kugadziriswa., pamwe nenyaya dzega dzega dzekuburitsa.
Unogona kutenga bhuku pano: Chakavanzika chaXein
Kusanzwisisana kwakakonzera kuparara kwepamoyo pakati peAxlin naXein kuchiripo. Pane rimwe divi, Plot inopinda muhupenyu hwemuraibhurari uye murwi sezvavanenge vachiedza kutsvaga mumwe, asi vanogara vachipedzisira vatarisana. Anoenderera mberi nekuunganidza kwake nezvezvikara, atove muchengeti weCitadel zviri pamutemo.
Ipapo, Rox anopinda munzvimbo yacho. Iye muchengeti wechidiki anokwanisa kunzwisisa zvakapusa naXein. Naizvozvo, ivo vanoumba yakasarudzika peya yevarindi, inoshanda kwazvo mukubvisa chero kutyisidzira. Nekudaro - sekuyedza kwaanoedza kuzviviga - Xein achiri kudanana naAxlin, kunyangwe aine bhizinesi rake risati rapera remhuri.
Mhuka dzechikamu chechipiri
Xein anofungidzira kuti baba vake munhu anoshandura ganda, rudzi rwechikara chinokwanisa kuba chimiro chemunhu waachangobva kubatwa. Aya mazamu anogona kungoonekwa chete nevachengeti vemaziso machena. Sezvo nyaya ichiitika, kuteedzana kwechinguvana kunotarisa kune vanhu vakaita saRox kana Dex (shamwari yakanaka yeAxlin's), mavambo avo asina kujeka.
Gare gare, iyo Citadel inopinda munzvimbo yemhirizhonga nekuda kwekuzara kwevanhu vanobva kumuganhu wekumadokero (ikozvino unodzorwa nezvikara). Axlin anoda kuenda kunobatsira vanhu venyika yakeAsi kana Xein atumirwa kumberi kwekumabvazuva - ane njodzi kupfuura zvese - nekuda kwekusavimbika, akafunga kuenda kunomununura.
Unogona kutenga bhuku pano: Basa raRox
Iwo marongero evatambi vese vanobatanidzwa mumabhuku apfuura anoyanana. Nekudaro, hukama pakati pavo hunowedzera kuoma nekuda kwezvakavanzika zvakaratidzwa, kunyanya pakati peAxlin naXein. Kunyangwe, izvo zvakafanana zviwanikwa zvinogona kubata kiyi yekusunungura nyika yako kubva pajoko remanyoka.
Nguva yakapfuura nekiyi dzeramangwana rakanaka
Pakati pevanhu vakaungana seri kwemadziro vachida kwazvo kupinda muCitadel an apocalyptic uzivi hunobuda hunobuda, iyo Nzira yeChirimo. Boka redzidziso-rehungwaru iro rine masirogani anowanzo gumisa kuguma kwenyika inozivikanwa.
Sezvineiwo, Kana Dex atanga kuongorora sekereke iyi, zviyeuchidzo zvinomupa zvinongedzo nezve iyo nguva yapfuura iyo yakamutsa zvikara. Mukupedzisira, zvese zvinongedzo zvinopupurira chikonzero chinoshamisira uye kuvhara kwakakwana kwedenderedzwa revatambi vese mu trilogy.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Vatariri venhare